Yakachipa Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Hydraulic Organic Waste Composting Turner Machine?
Iyo Hydraulic Organic Waste Komposting Turner Muchina absorbs zvakanakira yemhando kugadzirwa michina kumba uye kunze. Iyo inoshandisa zvizere mhedzisiro yekutsvaga kweiyo yepamusoro-tech biotechnology. Iyo midziyo inosanganisa michina, magetsi uye hydraulic yakasanganiswa yekudzora tekinoroji. Ipo ichifefetedza uye ichiisa oxygen mumidziyo yekuisa manyowa, inogona zvakare kudzora tembiricha uye hunyoro hwezvinhu zvekugadzira manyowa kuitira kuti zvigadzirwa zvemumanyowa zvikurumidze kukura, izvo zvinogona kusangana nezvinodiwa zvekugadzira manyowa makuru.
Hydraulic Kusimudza Composting Turner Zvimiro
1) Inokodzera kutendeuka uye kuvirisa yemarara manyowa, senge, sludge marara, shuga chigayo firita matope, yakaipa slag keke uye mashanga sawdust.
2) Inoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa manyowa uye kubvisa hunyoro mashandiro e organic fetiraiza, fetiraiza, sludge marara, horticulture kosi uye Mushroom kurima fekitori.
3) Inogona kushandiswa nekuvirisa kwezuva, yekuvirisa tangi uye nharembozha, nezvimwewo Uye muchina we mobile unogona kuona yakawanda slot muchina unoshandiswa mukuita.
4) Yakaviriswa uye zvinhu zvayo zvinotsigira zvinogona zvakare kunge kuri kuenderera kwakakura kuburitsa.
5) kushanda zvakanaka, kumeso kushanda, kusimba uye kusimba, kunyange kutendeuka kukanda.
6) Centralized kuzvidzora cabinet, anogona kuzadzisa Chinyorwa kana otomatiki kudzora basa
7) Yakashongedzerwa neinotanga nyoro, kutanga-up kukanganisa mutoro wakaderera
8) Yakashongedzerwa neinomutsa zino hydraulic yekusimudza system.
9) Limit yekufambisa switch, tamba chinzvimbo chekuchengeteka uye muganho.
Hydraulic Kusimudza Composting Turner Kushanda Musimboti
Iyo huru shaft yeiyo Hydraulic Kusimudza Composting Turner adopts refu banga bhaa ane kuruboshwe uye kurudyi zononoka uye diki mugodhi dhayamita, kuitira kuti muchina anogona zvakaenzana kutendeuka zvinhu, ane zvakanaka gasi permeability, mukuru kutyora mwero uye pasi nemishonga. Chikamu chekutepfenyurisa chinotora hombe yekukanda cheni yekutyaira, iyo inoita kuti simba ribudirire kumusoro, ruzha ruri pasi, mashandiro acho akatsiga, uye kutsvedza hakutsvedza. Chimiro chakazara chisimbiso, chakachengeteka uye chakavimbika. Chishandiso chinodzorwa zvizere nebhokisi rimwe chete, zvichiita kuti zvive nyore uye zvakachengeteka kushanda.
Hydraulic Kusimudza Composting Turner Vhidhiyo Ratidziro
Hydraulic Kusimudza Composting Turner Model Sarudzo
Kufamba Kumhanya (m / min)
Kukwanisa (m³ / h)
Pashure: Crawler Type Organic Waste Composting Turner Muchidimbu
Zvadaro: Horizontal Fermentation Tangi
Nhanganyaya Chii chinonzi Horizontal Fermentation Tank? Kupisa Kwekudziya Waste & Mufudze Kuvira Tangi kunonyanya kuita yakanyanya-tembiricha eerobic yekuvirisa yezvipfuyo nehuku yehuku, tsvina yekicheni, sludge uye imwe tsvina nekushandisa chiitiko chema microorganisms kuti uwane yakasanganiswa sludge kurapwa kunoenderana ...